पदस्थापनले व्यक्ति ठड्यायो, एथिक ठड्याएन | www.sidhakurausa.com
पदस्थापनले व्यक्ति ठड्यायो, एथिक ठड्याएन
हिजो साँझ न्युयोर्कको सत्यनारायण मन्दिरमा आयोजित नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका(नेजसअ) को गत नोभेम्बर २२ र २३ मा सम्पन्न निर्बाचन जितेका २९ पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदस्थापनले त्यहा भित्र व्यक्तिहरु ठड्याउन सफल भयो तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको भगिनी संस्थाको मूल्य मान्यता (एथिक) ठड्याउन नसकेको अनुभव उपस्थित २६ जना मध्ये १७ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गरेको खबर सिधाकुराले प्राप्त गरेको छ । भगवान मैनाली, सुबेन्द्र रानाभाट र गोकुल ढकाल अनुपस्थित २९ सदस्यीय बोर्डका २६ जना उपस्थित उक्त कार्यक्रम ६ घण्टा एउटा बिषयमा विवादमा फसेर बितेको थियो ।
त्यो बिबाद थियो ”एथिक” अर्थात नेजसअको दोश्रो अधिबेसनले टेक्सासमा परिमार्जन गरेको बिधानलाई निर्बाचित अध्यक्ष आनन्द बिस्टले उनका व्यक्तिगत सल्लाहाकारहरु द्वय खगेन्द्र जिसी र बेद खरेलको उक्साहटमा बर्तमान बोर्डमा लागु गर्न अनिक्षा ब्यक्त हुँदा बहुमत (१७ जना) को खिल्ली उडाईएको र मान मर्दन भएको थियो । नेजसअको दोश्रो अधिबेसनले एकताको संदेश दिनु पर्ने यो घडीमा एक जना व्यक्तिको हुकुम शिरोधार्य गर्न नेजसअ बन्दी हुन पुग्यो हिजोको पदस्थापन ।
नेजसअमा व्यक्ति जो सुकै आउन जाउन, अमेरिकाबासी प्रजातन्त्रबादीहरुले एक व्यक्ति हुकुमी शासन नेजसअ भित्र खोजेका थिएनन, उनीहरुले त्यहाँभित्र प्रजातन्त्र, पारदर्शिता, पद्दति जस्ता मुलभूत कुराहरु सामुहिक नेतृत्वमा हेर्न चाहेका थिए । बाल्टिमोरदेखिका भाडाका टट्टू समेत ल्याएर गर्न खोजिएको पदस्थापनले के संदेश दियो त? व्यक्ति व्यक्तिका भाडाका टट्टूहरुले अहिले कार्यक्रम सकिएको झन्डै १८ घण्टा बित्न लाग्दासम्म बजारमा केहि संदेश बाहिर निकाल्न सकेनन । न्युयोर्कमै मात्र नेजसअका व्यक्ति व्यक्तिले पालेका भाडाका टट्टूहरु १ दर्जन भन्दा बढी भएको सन्दर्भमा हिजोको ह्याङ्गओभरमा उनीहरु अझै सुतिरहेको सबैलाई भान परिरहेछ ।
विगत लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको ऐतिहासिक अधिवेशनबाट गतिरोध अन्त्य भएको विश्वासमा रहेका नेजसअका सम्पूर्ण सदस्यहरू फेरि निराश बन्न पुगेका छन् । लामो वादविवादपछि डालसमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू समेतको रोहबरमा नेजसअको अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व बिस्टको नेतृत्वमा चयन भएको थियो । त्यो अधिवेशन अमेरिकामा मात्र नभई माउ पार्टी नेपाली काँग्रेस र विश्वभरका प्रजातन्त्रवादीहरुको केन्द्रविन्दु रहेको थियो । जसले अमेरिकाबासी आम प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीहरुमा उत्साहको सञ्चार गरेको थियो । यसबाट सर्वसम्मत नभए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नेतृत्व चयन भएको थियो । नेपाली जनसम्पर्क समिति प्रजातन्त्र, पारदर्शी र पद्दतिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढने विश्वास लिईएको थियो ।
मतदाताहरुले पनि सङ्गठनको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ भन्ने चाहना अनुरूप नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको नेतृत्व चुनिएको सबैले महशुस गरेका थिए । अधिवेशन सम्पन्न भएको दुई हप्तापछि नेजसअको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो । तर पहिलो बैठकमा नै अध्यक्ष बिस्टको क्रियाकलापले त्यहाभित्र हलचल मच्चाउन पुग्यो । उहाँले आफूखुशी र एकलौटी ढङ्गबाट काम गरेर आम प्रजातन्त्रवादीहरुको मन दुखाउनु भएको थियो । अध्यक्ष बिस्टले वहाँका द्वय निजि सल्लाहाकारहरु जिसी र खरेलको कुरा सुनेर डालस अधिवेशनमा पारित भएको विधान रातारात परिवर्तन गर्नु भयो ।
माउ पार्टीको बिधान महाधिबेसन र नेजसअको बिधान अधिबेसन प्रतिनिधिहरुले मात्र परिबर्तन गर्न सक्ने प्राबधानलाई अध्यक्ष बिस्टले लत्याउनु भएको थियो । उहाँलाई विधान परिवर्तन गर्ने अधिकार कसले दियो? विधान परिवर्तन केका लागि गरियो? भन्ने विविध कुरा केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरुमा आशंका उब्जिएको थियो । अध्यक्ष बिस्टले बिधान बिपरित गरेका यस्ता क्रियाकलापहरुको एउटा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बरिस्ठ उपाध्यक्ष धनन्जय नरसिंह केसीले सार्बजनिक टिप्पणी गरेका थिए -यो कुरा जान्न र बुझ्न पाउनु र गलत क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउनु प्रत्येक नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूको अधिकार पनि हो । संस्थाप्रति कसैले नकारात्मक काम गर्छ र संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने काम कोही कसैबाट हुन्छ भने कुनै पनि संस्थामा रहने साथी चुप लागेर पनि बस्न मिल्दैन र बस्न पनि हुँदैन । एउटा व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिले संस्थालाई ठुलो हानी नपुर्याउला भन्न पनि सकिँदैन ।
बरिस्ठ उपाध्यक्ष केसीले अध्यक्ष बिस्टलाई सार्बजनिक टिप्पणीमा प्रश्न उठाएका थिए -डालस अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कुन विधान अनुसार निर्वाचन गरियो? तपाईँ आज उपसभापति मनोनीत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुन विधान अन्तर्गत गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले दुई जना सदस्य नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो विधानको कुन धारा प्रयोग गरेर गर्नुभयो? यी यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । बरिस्ठ उपाध्यक्ष केसीले थप्दै भनेका थिए -विगतमा म स्वयम् अधिवेशन तयारी समितिको सदस्य भएको नाताले भन्नुपर्दा हामीले पशुपति पाण्डेको संयोजकत्वमा कृष्ण लामिछाने र मनोज घिमिरे सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेका थियौँ । उक्त समितिले संशोधन सहितको विधान सम्पूर्ण च्याप्टर सभापतिहरु, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत राय सुझाव माग गरी सोही अनुरूप तत्कालीन केन्द्रीय कार्य समितिमा समेत छलफल गरेका थियौँ । त्यसमा छलफल गरी उक्त विधान उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विधान अधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरेर सो अनुरूप प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
उक्त बन्द सत्रमा विधान सम्बन्धी व्यापक छलफल पनि गरियो । त्यसमा केही साथीहरूले अर्को भ्रमको खेती गर्न सकिन्छ की भनेर केही व्यक्तिहरू हस्ताक्षर गरेको पेपर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सहमति भएको हो भनेर प्रचारबाजी समेत गरे । त्यो वास्तविकता के थियो भने कुन विधान अन्तर्गत जाने? के कति र कुन कुन पद रहने भन्ने बारेमा निर्वाचन समिति अनभिज्ञ थियो । विधान पारित नभएका कारणले गर्दा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बन्द सेसनले सबैभन्दा पहिला ३५ सदस्यीय कार्यसमिति राख्ने र उक्त कार्यसमितिमा तपसिलका पदहरुको चुनावबाट आउने भनेर उक्त बन्द सेसनले निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराएको मात्र हो । त्यसपछि निर्वाचन समितिले आफ्नो कार्य सुरु गरेको थियो । यदि त्यही कुरा नै विधान सम्बन्धी सहमति हो भनेर सुगा रटाई गर्ने साथीहरूलाई फेरि मेरो अनुरोध के छ भने कुनै विधान पारित गर्न वा विधान संशोधन गर्ने अधिकार बन्द सेसनका प्रतिनिधिहरुमा मात्र निहित हुन्छ, त्यो तपाइहरू केही व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दैमा साधारणसभाको अधिकार न तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँहरूको अधिकार नै हो, केसीले आफ्नो टिप्पणीमा लेखेका थिए ।
त्यस्तै धारावाहिक रूपमा अर्को भ्रमको खेती एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै यो विधानमा मेरो सहमति छैन भनेर हालेको पनि देखियो । म उहाँ मित्रलाई भन्न चाहन्छु कि यो एकाइसौं शताब्दीको अमेरिका हो, तपाईँ राणा शासनको श्री ३ महाराज होइन, जे बोल्यो त्यो कानुन बन्ने, “पाँडे पजनी” । यो तपाईँको मौलिक अधिकार हो । कुनै इस्युमा सहमति राख्ने या नराख्ने? त्यसलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु, यही नै हो प्रजातन्त्र तर यसको अर्थ यो नबुझनुस् कि तपाईँको सहमति नहुँनासाथ सबै प्रतिनिधि साथीहरूको सहमति नहुने होइन । तपाईँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको हो तर सम्पूर्ण उपस्थित प्रतिनिधिहरुको होइन । यदि तपाईँले सम्पूर्ण विचार समेट्न सक्ने खुबी भएको भए निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्ने थिएन र विवादित व्यक्तिको रूपमा तपाईँ संस्थामा देखापर्न हुन्न थियो होला भन्दै बरिस्ठ उपाध्यक्ष केसीले अध्यक्ष बिस्टले बिधान बिपरित मनोनयन गरेका सदस्य बेद खरेललाई इंगित गरेका थिए । बास्तबमा बरिस्ठ उपाध्यक्ष केसीले गरेको टिप्पणी सहि थियो तर केसीको त्यो बास्तबिक टिप्पणीलाई अध्यक्ष बिस्ट र उनका अघोषित सल्लाहाकार तथा मनोनित सदस्य खरेलले टेर पुच्छर लगाएका थिएनन । बिस्टले सिधाकुरासंगको एउटा टेलिफोन बार्तामा भनेका थिए -सन २००२ देखि आफुसंग संगै हिड्दै आएका खरेललाई केन्द्रिय समितिमा मनोनय गर्न पनि नपाउनु? अध्यक्ष बिस्टले बुझ्नु पर्ने थियो -नेजसअ भित्र उनका हजारौं मित्र छन, खरेल नै किन त? कीनकी खरेलले बिस्टको राम्रो रेखदेख गर्ने हुनाले खरेल नभए बिस्ट नेजसअ त्याग्न समेत सक्ने देखियो । प्रजातन्त्रमा त्यस्तो कदापि हुँदैन । यो कुरा बिस्ट र खरेल दुबैको महा भूल हो । ठुलो कमजोरी हो । राजा नभएर राज्य अड्किन्छ र?
नयाँ हिसाब मिलान, पुरानो हिसाब गुमनाम
एकताको दोश्रो अधिबेसनका लागि गठित अर्थ समितिका भक्त थापा, हरिबोल भण्डारी, ज्ञानेन्द्र कार्की, कृष्ण लामिछाने र अधिबेसन तयारी समितिका संयोजक बिष्णु सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित आम्दानी खर्च विवरण तथा होटल सेराटन, ज्ञानेन्द्र कार्की र भरत अर्याल नाउका उप-खाताहरुको कूल हिसाब किताबको स्टेटमेन्ट पदस्थापन समारोहमा प्रस्तुत भई त्यसको अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष बिस्टको बोर्डले पूर्ब संयोजकहरु द्वय खगेन्द्र जिसी र बिष्णु सुबेदीको अधिबेसन तयारी समितिले गरेका आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब निकाल्ने र त्यसको अनुमोदन गराउने काम गर्न सकेन । यसको मतलब हो द्वय पूर्ब संयोजकहरुको हिसाब किताब अझै गुमराहमा राख्ने, यो अमेरिकामा स्थापित गैर नाफामुलक संस्थाको अपारदर्शिताको पराकाष्ठा हो । अमेरिकामा रहेका तमाम प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीहरुले बिस्टको प्रशासनबाट हेर्न चाहेको पारदर्शिताको खिल्ली त्यसले खिल्ली उडाएको छ । सन २००७ पछिका हिसाब किताब गुमनाम गर्नाले नेजसअ भित्र ठुलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको सबैलाई आशंका रहेकोमा त्यो साबित गरेको छ । नेजसअको टेक्सासमा रहेको बैंक अफ अमेरिकाको खाताको सन २००७ देखिको स्टेटमेन्ट वेब साइटमा राखेर सबै प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीहरुलाई सुसुचित गराउन अध्यक्ष बिस्टको प्रशाशनलाई सिधाकुरा सुझाउछ । नेजसअको आर्थिक पारदर्शिता कायम नराख्ने हो भने यो संस्थाप्रति कांग्रेसकै आस्थाबान सदस्यहरु टाढिने र नेजसअप्रतिको बिस्वशनियता गुमनाम हुने अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोश्रो अधिबेसनको आम्दानी बापत ७२ हजार २ सय ९० डलर र खर्च ६६ हजार ६ सय १० डलर भई कूल बचत ४ हजार ७ सय ४३ डलर देखाएर अधिबेसन तयारी र आयोजकहरुले कम्तिमा अधिबेसनको आर्थिक पारदर्शिता कायम राखे तर पूर्ब संयोजक द्वय र बर्तमान अध्यक्ष पुराना खर्चहरु गुमनाम पारेर कलंकित साबित हुनु हुन्न, तत्काल आम्दानी खर्च सार्बजनिक गर्नुहोस । नेजसअका व्यक्ति व्यक्तिका भाडाका टट्टूले सार्बजनिक गर्दैनन भने सिधाकुराले सार्बजनिक गरिदिन्छ, आउनुहोस ।
नेजसअ भित्र एथिक
अमेरिकामा स्थापित नेजसअ भित्र यहाँ रहेका प्रजातन्त्रप्रेमीहरुले एथिक हेर्न चाहेका हुन अध्यक्ष आनन्द बिस्टको अनुहार हेर्न चाहेका होइन भने बेद खरेलको सल्लाहा र खुराफात चाहेका होइनन । नेजसअ अमेरिका एउटा स्पस्ट दृस्टीकोण भएको सामाजिक तथा राजनीतिक गतिबिधि गर्ने उद्देस्यमुलक संस्था यहाँ रहेका प्रजातन्त्रप्रेमीहरुले हेर्न चाहेका हुन ।
एक व्यक्ति नेतृत्व र मनपरी कसैले चाहेका छैनन । समाजमा भएका सबै बर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेजसअले सदस्य मनोनयन गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ । निर्बाचित अध्यक्षको मनोमानीले नेजसअ चलन सक्तैन । २९ सदस्यीय बोर्ड गठन भईसके पछि बाँकी ६ सदस्यहरु आदिबासी, जनजाती, मधेसबादी र पिछडिएकाहरुलाई समेट्नु पर्नेमा चुनाव हारेका बिष्णु सुबेदी र बेद खरेललाई सन २००२ देखिका मित्र भन्दै टिके बनाउने हो भने नेजसअ शुशिल कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस तर केपी वलीको खटन पटनमा बाच्नु पर्ने कांग्रेसका सदस्य र सभाषदहरुको संबिधान सभा जस्तो हुन्छ ।
यहि भएर हिजै पूर्ब संयोजक सुबेदीले आफु मनोनित सदस्यको हैसिएतमा नभई पूर्ब संयोजकको नाताले पदस्थापनमा उपस्थित भैसकेको बताएका थिए । उनको यो कदम असल मूल्य मान्यतामा आधारित छ । सुबेदीले बोलेको त्यो कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो । यस्तै बचन खरेलबाट पनि आउनुपर्छ । बिशेषगरी अध्यक्ष बिस्ट नै यस मानेमा स्पस्ट हुनुपर्छ । असल पद्दति, प्रजातन्त्र र पारदर्शितामा अध्यक्ष बिस्टले सम्झौता गरेर गलत मूल्य मान्यता नेजसअ भित्र भित्रियो भने सिधाकुरालाई सम्झनु उनका कदमहरु यहीं ब्रेक लाग्छन । लामो समय राजनीति गर्ने इक्षाशक्ति भएका व्यक्तिहरु क्षणिक लाभमा अहिले रुमलिने हो भने माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसमा कहिले पस्नु? डोटीको सभाषद कहिले हुनु? मन्त्रि र प्रधानमंत्री कहिले हुनु?
आफु सरह निर्बाचित भएका नेजसअका बोर्डका सबैलाई आफ्नै झोला बोक्ने जस्तो ब्यबहार गरियो, अन्य भित्र र बाहिर रहेका मित्रहरुलाई सत्रुतापूर्ण ब्यबहार भयो भने बुझ्नु नेजसअको ३ बर्षे अध्यक्षता पहिलो र अन्तिम गन्तब्य हो । हिजोको पदस्थापनले नेजसअ भित्र व्यक्ति ठड्यायो तर एथिक ठड्याएन -यो हाम्रो बुझाई हो ।